Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण पीसीआर शुल्क तोकिएभन्दा बढी
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०८:२१
काठमाडौँ, १२ भदौ । निजी अस्पतालहरूले पीसीआर परीक्षणको शुल्क आफूखुसी लिने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकामा कतिपय निजी अस्पतालले ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म असुलेको भेटिएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पीसीआर गराउन स्वीकृत लिएकै अस्पतालले समेत महँगो शुल्क लिएको पाइएको छ । यसरी शुल्क लिनेमध्येको एक हो, ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल । यो अस्पतालले पीसीआर परीक्षण गर्न नेपालीसँग ६ हजार रुपैयाँ र विदेशीसँग ७ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । ‘सरकारले तोकेको ५ हजार ५ सय हो तर पीपीई र स्वाब संकलन गर्ने भीटीएमका लागि हामीले थप १० प्रतिशत लिने गरेका छौं,’ अस्पतालका डा. नरेन्द्र तिमिल्सेनाले भने ।
मेडिसिटी आफैंले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न अनुमति पाएको छ । बिहीबारसम्म १ हजार १ सय जनाको पीसीआर परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । तीमध्ये चार जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ ।
निजी अस्पताल मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालले पनि पीसीआरलाई नाफा कमाउने आधार बनाएका छन् । पाटन, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले कोरोनाको लक्षण भएका बिरामीसँग पनि शुल्क लिएर मात्रै पीसीआर गराउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार वीरले २ हजार ५ सय जनाभन्दा धेरैको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर पीसीआर गर्दा करिब १ करोड ४० लाखभन्दा बढी उठाइसकेको छ । पीसीआर गर्न भीटीएम, रिएजेन्ट, एक्स्ट्र्याक्सन किट सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
शिक्षण अस्पतालमा स्वाब दिनुअघि नै ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । शिक्षणले भीटीएमसमेत संक्रमितलाई किन्न लगाउने गरेको छ । अस्पतालका चिकित्सक डा. सन्तकुमार दासले केहीअघिसम्म बिरामीलाई भीटीएम किनाए पनि अहिले त्यस्तो नभएको बताए । ‘निजी अस्पतालले घरघरमै गएर नमुना संकलन गर्न थालेपछि हाम्रोमा पैसा तिरेर पीसीआर गर्ने न्यून छन्,’ उनले भने । ५ हजार ५ सयमा पीसीआर गराइरहेको उनले बताए ।
पाटन अस्पतालले ५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ लिएर मात्रै पीसीआर परीक्षण गराउने गरेको छ । टिकटवापत भनेर अस्पतालले ७५ रुपैयाँ बढी लिएको हो । यी तीनवटै अस्पतालले आफैं स्वाब संकलन गर्न सरकारबाट अनुमति पाएका छन् भने अन्य अस्पतालले संकलन गरेका स्वाब पनि परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले पनि उपत्यकाका कुन अस्पतालले कति शुल्कमा पीसीआर गराइरहेको छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरेको छ । वीर, पाटन, टिचिङले सरकारी कार्यालयबाट सिफारिससहित आएकालाई निःशुल्क पीसीआर गराउने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । अन्यको हकमा भने शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यी तीन अस्पतालमा पीसीआर गराउनेमध्ये २५ प्रतिशतसँग मात्रै शुल्क लिन पाइने र ७५ प्रतिशतलाई निःशुल्क पीसीआर गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुना झाले पीसीआर गर्न निजी अस्पतालले ९ हजार रुपैयाँसम्म लिएको गुनासो आए पनि बिल नपाउँदा कारबाही गर्न नसकिएको बताइन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।